इनरुवा अस्पताल प्रति जनमानसमा वितृष्णा बढ्दै - inaruwaonline.com
इनरुवा अस्पताल प्रति जनमानसमा वितृष्णा बढ्दै
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २५, २०७६ समय: १५:३१:१०
इनरुवा। सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा अवस्थित इनरुवा अस्पताल सर्वसाधारण बिच दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। विभिन्न कारणले बिबादमा मुछिदै आएको अस्पताल आमसर्वसाधारणको हेराईमा छवि धुमिलिंदै गएको अस्पतालको साख पछिल्ला दिन अझ खस्केको छ । अस्पतालमा उपचारकालागि पुग्ने विरामीको संख्या समेत घट्दो छ । विपन्न समूदाय बाहेक अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको निकै कम भेटिन्छ । विपन्न समुदायका बिरामि समेतले हाल आएर संतोषजनक तथा विश्वसनिय औषधि उपचार नपाएको अवस्था छ।
वर्ष २ का सुशांत यादव करिब हप्ता दिन देखि ज्वरोले ग्रसित भए पछी उनका अभिभावकले इनरुवा अस्पतालमा चेकजाँच गराउन मिती २०७६।०४।२३ मा लगेका थिए। अस्पतालले समान्य चेकजाँच गरि बिरामिलाई घर फरकिने सल्लाह दिएको थियो। इनरुवा अस्पतालको ल्याबमा उक्त बिरामी बालकको रगत परिक्षणको क्रममा प्लेटलेट्स १ लाख १८ हजार देखिएको थियो तथा वाइडल टेष्ट नेगेटिभ बताईएको छ। सामान्यतया एक स्वास्थ्य मानिसको रगतमा प्लेटलेट्सको मात्रा १ लाख ५० हजार देखि ४ लाख ५० हजार हुनु पर्नेमा उक्त बिरामी बालकको प्लेटलेट्स सामान्य भन्दा पनि न्युन रहेको पाइएको थियो तथा बिरामीको अवस्था सामान्य भन्दा फरक रहेकोले गर्दा बिरामीका अभिभावकले अन्यत्र चेकजाँच गराउदा बिरामीको अवस्था सामान्य रहेकोले अहिले बिरामी बालकलाई बिराटनगरको एक अस्पतालमा भर्ना गरि उपचार सुरु गरिएको छ।
एक बालरोग विशेषज्ञका अनुसार बिरामी बालकको रगतमा भएको प्लेटलेट्सको मात्रा कम देखिएमा १२ देखि २४ घण्टा पछि बिरामीको अवस्था हेरेर सो रगत परिक्षण पुनः गराउनु पर्ने हुन्छ। इनरुवा लगायतको क्षेत्रमा डेंगु संक्रमणको प्रभाव भएकोले गर्दा पनि डेंगु जाँचकालागि अस्पतालले सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीको शारिरिक हाउभाउ हेरेर भर्ना गरि उपचार शुरु गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो।
बिरामी बालकको अवस्था सामान्य भन्दा फरक रहेकोले गर्दा बिरामीका अभिभावकले पुनः अन्यत्र चेक जाँच गराउदा बिरामी करिब हप्ता दिन देखि ज्वरोले ग्रसित भएकोमा अन्य चिकित्सकको सुझाव अनुसार सम्भवत टाईफाईड वा डेंगुको संक्रमण हुन सक्ने भएकोले उक्त बिरामिलाई भर्ना गर्न सुझाव दिई भर्ना गर्न पठाईएको छ।
इनरुवा अस्पतालले डेंगुको परिक्षण नगराएको, रगत परिक्षण पुनः १२ देखि २४ घण्टामा नगराइएको, बिरामीलाई भर्ना गर्नु पर्ने सल्लाह समेत नदिएको पाइएको छ। अस्पताल भित्रका एक स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार इनरुवा अस्पतालमा उक्त बिरामिलाई चेक जाचँ चिकित्सकले गर्नु पर्नेमा त्यसोनभै अन्य स्वास्थ्यकर्मी (पारामेडिक्स) द्वारा चेक जाँच गरिएको हुनसक्ने बताएका छन्।
अस्पताल भित्र चिकित्सक नभएको हो कि? अस्पताल जहिले पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी (पारामेडिक्स) कै भरमा चल्ने हो? यस विषयमा अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितीको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने स्थानियहरुको बुझाई छ। केही महिना अघि देखि मात्र संचालनमा आएको प्रसुति सल्यक्रिया यस अस्पतालकालागि राम्रो पक्ष भएतापनि अस्पताल भित्रको गुटबन्दि तथा राजनितिकरणले अस्पताललाई धरापमा पार्न सक्ने प्रवल सम्भावना निश्चितै देखिन्छ। अस्पतालभित्रको आन्तरिक खिचातानिले आमजनताको स्वास्थ्य संग सिधै खेलबाड गरेको देखिन्छ।
यसरी इनरुवा अस्पतालले एउटा सामान्य बिरामिमा पनि ठुलो लापार्वाही गरि रहदा जनमानसमा दिन दिनै इनरुवा अस्पताल प्रति वितृष्णा बढ्दै गएको पाइएको छ। जसले गर्दा इनरुवाबासिमा सुलभ र भरपर्दो उपचारको अपेक्षामा प्रश्न लागेको छ।